05W « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်သို့ ဦးတည်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) မုန်တိုင်းဖြစ်လာတော့မည်
One comment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ရောက်ရှိလာမည့် TD-FIVE
Leaveacomment Uncategorized လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) အပူပိုင်းမုန်တိုင်း BEBINCA အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာ
By mmweather.ygn, on June 21st, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမည် BEBINCA ဟု ပေးထားပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်း BEBINCA သည် ဟောင်ကောင်၏ တောင်ဘက် မိုင် ၄၂ဝ ခန့်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်း Haikou မြို့ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် ၅၆၅ မိုင်ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင် မြောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိနေပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ ဇွန်လ ၂၂ ရက်(စနေနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈၃ဝ နာရီမတိုင်မီ တရုတ်နိုင်ငံ Guangdong ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းကမ်းခြေအား Zhanjian နှင့် Maoming မြို့ ၂ မြို့ ကြားမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ ပုံ . . . → Read More: လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W(FIVE) အပူပိုင်းမုန်တိုင်း BEBINCA အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာ
Leaveacomment Uncategorized INVEST 94W မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W – FIVE ဖြစ်လာပြီ
ဇွန်လ ၂ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 94W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း-Tropical Depression(TD) 05W အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာကြောင်း JTWC မှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TD 05W (FIVE) သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၄ဝဝ ခန့်၊ ဟောင်ကောင် အရှေ့တောင်ဘက် ၇၅၅ မိုင်ခန့်၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အနောက်ဘက် ၁ဝ၂၅ မိုင်ခန့်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်(အနောက်ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်)တွင် တည်ရှိနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၅ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
. . . → Read More: INVEST 94W မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W – FIVE ဖြစ်လာပြီ
Leaveacomment Uncategorized ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် မုန်တိုင်း လာဦးမည်လော
By mmweather.ygn, on June 20th, 2012%
ဂျပန်နိုင်ငံ ဟွန်ရှုးကျွန်းကြီးကို Higashimuro, Shingu စတဲ့ မြို့များအနီးမှ ကုန်းတွင်းကို စတင်ဝင်ရောက်ကာ တိုကျိုမြို့တော် မြောက်ဘက် မိုင် ၈၀ ကျော်ခန့်မှ ဖြတ်သန်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း GUCHOL(05W) ဟာ ဇွန်လ ၁၉ ရက် ည သန်းခေါင်မှာ လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း အဆင့်နဲ့ ဟွန်ရှုးကျွန်းမြောက်ပိုင်း၊ Futaba မြို့ပေါ်မှ ဖြတ်ပြီး ဂျပန်ပင်လယ်မြောက်ပိုင်း ရေပြင်ကို ပြန်လည် ဆင်းသက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း GUCHOL အနေနဲ့ ပြန်လည် အားကောင်းလာခြင်း မရှိနိုင်တော့ပဲ တဖြည်းဖြည်း အားပျော့ပျက်ပျယ်သွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဇွန်လ ၂၀ ရက် နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ NRL data များအရ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း ဖြစ်သွားတဲ့ 05W(GUCHOL)ဟာ ဖူကူရှီးမားမြို့ရဲ့ အရှေ့-အရှေ့မြောက်ဘက် . . . → Read More: ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် မုန်တိုင်း လာဦးမည်လော
Leaveacomment Uncategorized ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း GUCHOL ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေပြီ
By mmweather.ygn, on June 18th, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းမှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး GUCHOL(ဖိလစ်ပိုင် အမည် BUTCHOY) သည် အဆင့်-၄ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီး အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနေပြီး စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့် ရောက်လုနီးပါး အခြေအနေတွင် ရှိနေကြောင်း သိရပါသည်။
ယနေ့ ဖိလစ်ပိုင်စံတော်ချိန် ည ပိုင်း(လာမည့် ၁၂ နာရီအတွင်း)တွင် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်မှ ထွက်ခွာပြီး၊ အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ လျော့ကျသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိုကီနာဝါကျွန်း အရှေ့ဘက်မှ ကပ်၍ ဖြတ်သန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဟွန်းရှုကျွန်းတောင်ပိုင်းကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရပါသည်။
05W GUCHOL 18 Jun 2012 0000Z Location: 22.2 127.4 Winds: 115 knots (Category 4) Central Pressure: 937 hPa
. . . → Read More: ဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းအား တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း GUCHOL ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်မည့် အန္တရာယ်ရှိနေပြီ
Leaveacomment Uncategorized ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ GUCHOL ၂၄ နာရီအတွင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်-၃ ဖြစ်လာတော့မည်
By mmweather.ygn, on June 15th, 2012%
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း GUCHOL(ဖိလစ်ပိုင်အမည် BUTCHOY) -05W) သည်၊ ဇွန်လ ၁၆ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂း၃၀ နာရီ(0600 UTC) တွင် အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည်ဟု TSR မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း GUCHOL သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း မင်ဒါနာအိုကွန်း၏ အရှေ့ဘက် မိုင် ၃၄၀ ခန့်၊ မနီလာမြို့တော် အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၇၄၀ ခန့် ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပြီး မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၁ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားလျှက်ရှိပါသည်။
မုန်တိုင်းအရွယ်အစား အချင်း ၅၂၀ ကီလိုမီတာ(၂၈၀ နော်တီကယ်မိုင်) ရှိနေပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ . . . → Read More: ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်မှ GUCHOL ၂၄ နာရီအတွင်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်-၃ ဖြစ်လာတော့မည်
Leaveacomment Uncategorized အားကောင်းလာမည့် မုန်တိုင်း GUCHOL(05W) နှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်
ဇွန်လ ၁၄ ရက်၊ ညနေပိုင်းတွင် ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်သို့ စတင်ဝင်ရောက်လာတော့မည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း GUCHOL(05W) သည် ၂၄ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့လည်းကောင်း၊ ဇွန်လ ၁၇ ရက်(၇၂ နာရီအတွင်း) အဆင့် ၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့လည်းကောင်း ရောက်ရှိလာမည်ဟု TSR မှ ခန့်မှန်းထားပြီး မုန်တိုင်းသည် မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားရာမှ အရှေ့ဘက် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုကီနာဝါကျွန်းသို့ လာမည့် နာရီ ၁၂၀(ဇွန်လ ၁၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၀၆း၃၀ နာရီ နောက်ပိုင်း) တွင် ဦးတည် ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။
အားကောင်းလာမည့် မုန်တိုင်း GUCHOL(05W) နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၊ မုတ္တမကွေ့၊ မွန်တနင်္သာရီ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် . . . → Read More: အားကောင်းလာမည့် မုန်တိုင်း GUCHOL(05W) နှင့် လေပြင်းအန္တရာယ်
Leaveacomment Uncategorized ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလာမည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း GUCHOL
By mmweather.ygn, on June 13th, 2012%
ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်း၌ ဇွန်လ ၁၁ ရက် နေ့တွင် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဖြစ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့် လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 05W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ ဇွန်လ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် GUCHOL(05W) ဟု အမည်ပေးထားပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း GUCHOL သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်၍ ရွေ့လျားရင်း ပိုမိုအားကောင်းလာကာ လာမည့် ၄၈ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။ မုန်တိုင်း GUCHOL ၏ မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် ဒီလှိုင်းအမြင့် ၁၃ ပေရှိပြီး၊ လက်ရှိ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီမိုင် . . . → Read More: ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အနောက်မြောက်ပိုင်းမှ ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားလာမည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း GUCHOL